Mmemme nrite Aromaeasy - Ndị na -ekesa ihe n'ahịa maka mmanụ dị mkpa | AromaEasy
Nabata na klọb ụgwọ ọrụ "Yaas"!
Ọ bụ klọb juputara na -egbu maramara na “yaas” maka ihe ọ bụla!Gini mere ị chọghị isonye na anwansi niile na -echere gị?
Nweta Sparkles maka dollar ọ bụla ejiri.
Nweta Sparkles maka nyocha ngwaahịa ọ bụla edere.
Jiri Sparkles gị maka uru ego na ịzụrụ ihe.
Mepee uru ka ị na -azụ ahịa ma na -enweta ego!
Ndị na -amụba amụba
Nlaghachi ụbọchị 30 n'efu
Ọzụzụ azụmahịa efu
Ịnweta mbido mbata ọhụrụ
Mbupu n'efu dị
Ịnweta ahịa n'oge
Onyinye ụbọchị ọmụmụ
Akwụkwọ ịkpọ òkù maka ihe omume pụrụ iche
Ndepụta ngwa ahịa na usoro ọ bụla
Ọrụ nhazi ngwaahịa Merchandiser
Kedu ka Mmemme Ụgwọ Ọhụrụ a si arụ ọrụ?
Ọ dị mfe! Naanị ihe ị ga -eme bụ ịnakọta Points Sparkle nke ị nwere ike gbapụta maka ụgwọ ọrụ!
Otu esi anakọta isi okwu
Site na mmemme gara aga, ị ga -enweta otuto naanị na ịzụrụ ihe gị, site na mmemme Ọhụrụ anyị, ị nwere ike nweta ọtụtụ ụzọ karịa ka ọ dị na mbụ! Chịkọta isi ihe na -atọ ụtọ nke Aromaeasy na ihe ị na -eme ugbu a dị ka ịkekọrịta echiche gị, ịtụle ngwaahịa ma ọ bụ ịdenye aha na ọwa anyị na mgbakwunye na ịnakọta isi ihe na ịzụrụ ihe! A ga -agbanwe isi ihe n'oge ọ bụla yabụ nọrọ na nche maka nkwalite pụrụ iche ebe ị nwere ike nweta isi ego! Naanị pịa na oval pink nke akara 'Ụgwọ ọrụ' iji bido!
Nke a bụ ihe ị ga -enweta taa:
Nweta 2 Sparkle Points maka $ 1 ọ bụla ị na -emefu
Nweta 250 Sparkle Points na ụbọchị ọmụmụ gị (gbaa mbọ mee ka anyị mara ụbọchị ọmụmụ gị ka ị kpọghee uru a!) Ị nwere ike ịtọ ụbọchị ọmụmụ gị site na ịpị bọtịnụ. Gaa na “ebe ị na -enweta ego” “mee emume ncheta ọmụmụ” na “setịpụ!”
Nweta 1000 Sparkle Points maka na-ede nyocha dị oke mma (karịa okwu 50) na saịtịjabber.com
Nweta 2500 Sparkle Points maka na-ede nyocha dị oke mma ya na foto saịtịjabber.com
Nweta 5000 Sparkle Points maka na-ede nyocha dị oke mma na vidiyo (ogologo oge karịa 1 nkeji) na saịtịjabber.com
Ntuziaka: Nweta ego ego !!!
Maka onye ọchụnta ego ọ bụla ị na -ezo aka onye nyere iwu mbụ,
ị ga -eme $ 75 na kredit Aromaeasy (Ihe nrite).
Etu esi gbaputa
Gaa n'ihu na ndenye ọpụpụ echekwara
Gbanwee itinye Sparkles na usoro ịkwụ ụgwọ
Hụ nguzozi m
A ga -etinye Sparkles na mkpokọta gị, yaas!